भारतीय विदेशमन्त्री भन्छन्- समस्या नभएका कुनै छिमेकी भए मलाई देखाउनोस् - Himali Patrika
भारतीय विदेशमन्त्री भन्छन्- समस्या नभएका कुनै छिमेकी भए मलाई देखाउनोस्
हिमाली पत्रिका १८ मङ्सिर २०७७, 4:52 pm
काठमाडौं। भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा देखिएको गतिरोध हट्दै गरेको बताएका छन्।
नेपालको नयाँ संविधान र सीमा विवादका कारण दुई देशबीच चिसिएको सम्बन्ध पछिल्ला उच्चस्तरीय भ्रमणले अघि बढाएको उनले दाबी गरेका छन्।
“हो, एउटा समय यस्तो थियो जहाँ हामी (नेपाल र भारत)बीच मुद्दा थिए,” भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले भारतीय अखबार ‘द हिन्दु’सँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, “तर, पछिल्ला केही साता यता नेपाल र भारतले सम्बन्धलाई अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् र यो आपसी कुरा हो।”
कुनै एक घटनालाई पुरै सम्बन्धको मापकको रुपमा लिन नहुने उनले बताएका छन्। र, एउटा घटनाले सबै सम्बन्धलाई न्याय पनि गर्न नसक्ने उनको धारणा छ।
“मलाई त्यस्तो दुई छिमेकी देखाउनोस् जसबीच कुनै समस्या छैन। अधिकांश हाम्रा छिमेकीमा लोकतन्त्र छ। मुद्दा यो हो कि उनीहरूको आफ्नै राजनीति छ, हाम्रो आफ्नै राजनीति छ, त्यहाँ मुद्दा पनि हुन्छन्,” भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले भनेका छन्।
छिमेकीसँगको तनावलाई कम गर्न मुद्दालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? साझा विन्दुको पहिचान कसरी गर्ने? भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने उनले बताए।
सम्बन्धमा देखिएका गतिरोध हट्न समय लाग्ने बुझाई उनको छ। समस्याका बादलहरू एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्षमा हटेपछि आफू कहाँ पुगियो भन्ने बल्ल थाहा हुने उनले बताए। “छिमेकमा हेर्दा ठूलो परिवर्तन आएको छ,” उनले भने।
२०७२ असोज ३ गते नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध चिसिएको थियो। त्यसपछि सुस्त गतिमा सुधारिदै गएको सम्बन्ध गत वर्ष भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि बिग्रेको थियो।
भारतले गत वर्ष नेपाली भूमी कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभाग भित्र पारेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो, जसको विरोध गर्दै नेपालले विरोध पत्र समेत पठायो।
यसै वर्ष जेठमा कालापानीहुँदै चीनको कैलाश मानसरोवर जाने लिंक रोड उद्घाटन गरेपछि सम्बन्ध थप विग्रेको थियो। सीमा विवाद सुल्झान नेपालले पटक पटक वार्ताको लागि अनुरोध गर्दा पनि भारतले वेवास्था गरेको थियो। त्यसपछि नेपालले बाध्य भएर कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो।
भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल र भारतबीच कूटनीतिक सम्वाद समेत ठम्प भएको थियो। उच्चस्तरीय भ्रमणहरू हुन सकेका थिएनन्। यसैबीच कात्तिकको पहिलो साताबाट भारतले उच्चस्तरीय व्यत्ति नेपाल पठाउन थालेको हो।
कात्तिक पहिलो साता भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनलाइसिस विङ्ग (रअ)का प्रमुख नेपाल आएका थिए भने कात्तिक तेस्रो साता भारतीय स्थल सेनाध्क्ष। यस्तै, भारतीय विदेश सचिवले मंसिर ११ र १२ गने नेपाल भ्रमण गरेका थिए।
यीनै भ्रमणहरूलाई देखाउँदै भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले नेपाल-भारत सम्बन्धले गति लिएको बताएका हुन्।